Kwakhona iinyanga ezi-2 ngaphandle kwe-Apple Music enkosi kuShazam | Iindaba ze-iPhone
Kwakhona, ukunyuswa kukaShazam ukufumana uMculo weApple simahla okwethutyana kusebenze kubo bonke abasebenzisi be-Apple abafake usetyenziso kwiikhompyuter zabo. Kule meko (ubuncinci kweyam yobuqu) isicelo esikwaziyo ukubona kunye nokuchonga iingoma ezidlalwayo kunye nokwabelana ngokuthe ngqo kwinkonzo yomculo wokusasaza, ngoku nika iinyanga ezimbini Apple Music.
Ngokusengqiqweni Olu nyuso lusebenza kwabo basebenzisi sele beyonwabele inkonzo yasimahla ngaphambili, kwaye kwimeko yam andinayo i-akhawunti yentlawulo ye-Apple Music kwaye ngaphambili ndandisele ndonwabele ukukhushulwa okufana nale. Kwimeko nayiphi na into, ndicinga ukuba abo bahlawulele inkonzo yoMculo we-Apple banokunikwa isaphulelo ngokumalunga neenyanga zasimahla.
Uzifumana njani ezi nyanga zimbini zoMculo weApple simahla
Ukuba ne-akhawunti ye-Apple yimeko yokuqala yokufumana esi sipho seenyanga ezimbini ze-Apple Music kwi-iPhone yakho, i-iPad okanye i-Mac.Ngaphandle koku, kuyacaca ukuba kufuneka sifake isicelo se-Shazam kwi-iPhone yethu. Esi sicelo sisimahla kwi-App Store kwaye unokuyikhuphela nangaliphi na ixesha, esingaqinisekisi ukuba ukunyuswa kuyasebenza kubasebenzisi abatsha (usele usiqinisekisile kwizimvo) abakhuphela ngoku.
Nje ukuba sifake i-app kwi-iPhone yethu kufuneka sifikelele kuyo kwaye silandele amanyathelo avela ezantsi. Kule meko kufuneka kuphela qinisekisa ukuthenga nge-ID yethu yokugqitha ye-Apple kwaye ugqibile. Umyalezo esinawo unyuso olusebenzayo uvela ngokuzenzekelayo. Abanye abasebenzisi abangazange basebenzise le nkonzo banokufikelela kwiinyanga ezi-5 zoMculo weApple simahla.
Khumbula ukuba singasoloko sirhoxisa umrhumo phambi kokuba uhlaziywe ngokuzenzekelayo. Kwakhona sinokurhoxisa umrhumo ngoko nangoko kwaye siqhubeke siyonwabele inkonzo ngoko akufuneki sikhumbule xa unyuso luphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Music » Kwakhona iinyanga ezi-2 zasimahla zoMculo weApple enkosi kuShazam
UOtto Ponce sitsho
Ayizukundivumela ukuba ndiyisebenze, indithatha ukuya kwiscreen sokuqinisekisa nge-ID yoBuso, xa iqinisekisa indinika umyalezo wempazamo othi "ikhowudi isebenza kuphela kwivenkile ye-iTunes e-USA." Andazi ukuba iShazam yam ibekwe kweliphi ilizwe okanye ndiyitshintshe njani.
Phendula uOtto Ponce